Ole Gunnar Solskjaer Oo Qirasho Sameeyey Nasiibkuna Dhaafiyey Inuu Mar Ku Biiro Kooxda Liverpool? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Sannadkii 1996-kii ayuu Ole Gunnar Solskjaer ku biiray Manchester United, xilli ay kooxdaasi ahayd midda ugu tunka weyn ee waqtigu u fiican yahay, kaddib markii ay sannadkii 1992-kii soo bilaabeen hanashada horyaalka Premier League oo uu tababarihii hore ee Sir Alex Ferguson isku habaystay ciyaartooyo tayo sare leh oo dunida ilowsiiyey Liverpool oo ahayd naadiga ugu weyn horyaalka wixii xilligaas ka horreeyey.
11 sannadood oo uu Old Trafford joogay, waxa uu Solskjaer u ciyaaray 366 ciyaarood oo uu dhaliyey 126 gool, waxaana lagu xasuustaa guushii sannadkii 1999kii ay Manchester United kasoo hoysay Champions League oo gool uu dhaliyey dhamaadkii uu kooxdiisa ka caawiyey inay Munich ku garaacdo finalka.
Tababaraha United ee hadda oo xirfaddiisa kasoo bilaabay naadiga ka dhisan waddankiisa Norway ee Malmo, ka hor intii aanu heshiiska u saxeexin sannadkii 1996-kii, waxa uu ku dhowaaday inuu ku biiro naadiga sida weyn ay u xafiiltamaan United ee Liverpool.
Waraysi uu siiyey website-ka Manchester United, ayaa waxa uu Ole Gunnar Solskajer kaga warramay sidii uu xilligaas ugu dhowaaday inuu Anfield ka dego, waxaanu yidhi: “Miyey isoo waceen Liverpool iyo Bayern Munich? Haa iyo sidoo kale Cagliari, PSG iyo dhawr kooxood oo kale.
“Laakiin anigu ma beddelayo taariikhda, waxaana jirtay hal doorasho oo kaliya, waxaanay ahayd xilli aan telefoon muhiim ah helay.
“Mulkiilaha Molde ayaa iigu yeedhay xafiiskiisa, waxaanu igu yidhi ‘Ma iska heli karnaa xafiiskayga – ma xiisaynaysaa?’ Haa, Okay ayaan ku idhi. Maalmaha xiga waxa aanu u baxaynay fasax dhawr maalmood ah. Sidoo kale, Martin Edwards (Guddoomiyihii hore ee Manchester United) ayaa isaguna fasax galayey, markaa waxay noqotay inaanu maalinta xigta isku nimaado. Diyaaraddoodii ayay xoogaa cillad ah ku timid, waxay soo kiraysteen diyaarad khaas ah oo ay iigu soo duuleen.
“Aad ayuu dareenkaygu u kacsanaa ka hor intii aanan la kulmin Sir Alex Ferguson, sababtoo ah waxaad ka baqaysaa inaad ku tidhaahdo wax qaldan oo iyaguna ay qalad kaa fahmaan marka ugu horreysaba. Waxaan ogaa in aanu arag anigoo kubbad ciyaaraha, markaa kulan muhiim ah ayay aniga ii ahayd.
“Aniga oo kaliya ayaan ahaa. Kalluun iyo jibis ayaanu ka cunnay maqaaxi ka dambaysa Old Trafford, waxaanan u malaynayaa inay ahayd saacad badhkeed ama 45 daqiiqadood. Wuxuu igu yidhi: ‘Lixda bilood ee ugu horreeya waxaad ka mid ahaanaysaa kooxda kaydka, kaddib ciidda Masiixiga ayaa laga yaabaa inaan kuusoo dallacsiiyo kooxda koowaad.’
“Garoonka Old Trafford ayay heshiiska kaga wada xaajoonayeen (labada kooxood), kaddib safar dalxiis ayay ii saareen. Safarka waxa la iigu sheegayay sababta aan halkan u joogo, aniguna waxaan idhi ‘Waxaan halkan u joogaa inaan heshiis saxeexo’.
“Xaqiiqdii wuxuu isiiyey qalinkiisii si aan heshiiska ula saxeexdo! Waxay ahayd waqti anigana sidoo kale ii wanaagsan, siday ila tahay.”
Si kastaba, Ole Gunnar Solskjaer maanta waxa uu tababare ka yahay kooxda uu maalintaasi yimid ee Manchester United ee qaabka heshiiskiisana uu jidkaasi u soo maray, waxaanu xili ciyaareedkan u dagaallamayaa inuu u soo dallacsiiyo booska afraad si ay uga qayb-geli karto Champions League, iyadoo ay Chelsea ka dambeeyaan saddex dhibcood.
Kooxda Chelsea Ayaa Guushii Ay Ka Gaadhay Kooxda Tottenham Ku Sii Adkaysatay Kaalinta Afaraad Ee Horyaalka Premier League?